0 Tuesday February 12, 2019 - 19:30:18
Ciidamada Xarakada Al Shabaab ayaa dagaal kula wareegay mid kamida gaadiidka Tiknikada ee ay isticmaalaan maleeshiyaadka dowladda Federaalka Soomaaliya.
0 Monday February 11, 2019 - 21:09:57
0 Sunday February 10, 2019 - 16:33:29
0 Visits: 27287 | Saturday February 09, 2019 - 11:14:43
Mu'assada Al-kataa'ib Garabka Warbaahineed Ee Xarakada Alshabaab ayaa soo saartay Filim Cusub oo xiisa badan.
0 Monday February 04, 2019 - 11:43:08
0 Sunday January 27, 2019 - 21:28:40
Kadib shir Jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada Jilib ee Jubbada dhexe ayuu Sheekh Max'med Abuu Cabdalla waaliga Jubbooyinka wuxuu warbaahinta ugusoo bandhigay saanado hub ah oo ciidamada Xarakada Al Shabaab ay kusoo qabsadeen weerarkii Baar Sanguuni ee dhacay isbuucii lasoo dhaafay.
0 Saturday January 26, 2019 - 20:15:48
Xoogaga Shabaabul Mujaahidiin ayaa dagaal xooggan kadib la wareegay mid kamida gaadiidka gaashaaman ee ciidamada dowladda Federaalka isticmaalayeen.
0 Saturday January 19, 2019 - 19:56:16
0 Saturday January 19, 2019 - 07:49:47
Xarakada Jihaadiga Talibaan ayaa weerar khasaara badan dhaliyay ka fuliysay wadanka Afghanistan oo muddo 17 sanadood ah ay dagaallo ka socdaan.
0 Wednesday January 16, 2019 - 21:25:38
0 Saturday January 12, 2019 - 10:41:04
0 Tuesday January 08, 2019 - 21:32:40
Magaalada Jannaale oo kamid ah gobolka Shabeellaha-hoose, ayaa ku tallaabsanaysa horumar ballaaran oo dhan weliba leh, gaar ahaan dhanka ganacsiga.
0 Tuesday January 01, 2019 - 20:34:05
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya madaafiic xooggan oo ciidamada Al Shabaab ay maanta ku weerareen xarunta Xalane oo ah saldhigga ugu weyn ee ciidamada AMISOM ku leeyihiin Soomaaliya.